शनिबारको फुर्सदिलो समयमा घरमै यसरी बनाउनुहोस् गाजरको हलुवा « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
शनिबारको फुर्सदिलो समयमा घरमै यसरी बनाउनुहोस् गाजरको हलुवा
काठमान्डौ। नेपाली भान्सामा प्रायः सुजीकै हलुवा पाक्ने गरेको छ । गाजरको हलुवा स्वस्थ र स्वादिलो परिकारमा पर्छ । यसलाई पहिले भारतीय परिकारको रूपमा लिइन्थ्यो । तर, नेपालमा पनि यो परिकार अहिले निकै रुचाइएको पाइन्छ । नेपालका प्रायः पार्टी हल, होटेल र रेस्टुरेन्टमा गाजरको हलुवा पाइन्छ । तर, इच्छा भए घरकै भान्सामा पनि यो परिकार तयार गर्न सकिन् छ ।
बनाउने विधि : गाजर र दूध कुकरमा राखेर पकाउने र झिक्ने। अर्को भाँडोमा घिउ तताउने चक्लेट पाउडर बाहेक सबै सामाग्री राख्ने । अब गाजर त्यसैमा राखेर मजाले चलाउने। दूध सुकेपछि र घिउमाथि माथि तैरिएपछि झिक्ने। थालमा राखेर जमाउने। माथिबाट चक्लेट पाउडरले टप गर्ने।
प्रतिव्यक्ति सामग्री : सबैभन्दा पहिले ग्यासचुल्होमा तावा बसाल्ने । तावा तातेपछि घ्यु राख्नुहोस् र राम्रोसँग खराउनुहोस् । खराएको घ्युमा अलैँची या सुकुमेल राख्नुहोस् । अलैँचीरसुकुमेल राखेको ४–५ सेकेन्डभित्र कोरेको गाजर राखिदिनुहोस् र राम्रोसँग चलाउनुहोस् ।
केही समय चलाएपछि चिनी दूध राखेर चलाउँदै गर्दा १०–१५ मिनेटमा सुक्न थाल्छ । दूध सुकेसँगै गाजर पनि सुक्खा हुन थाल्छ ।
यसपछि काजुरकिसमिस राखेर राम्रोसँग चलाउनुहोस्, ताकि हलुवामा सबैतिर लाग्न पाओस् । अब गाजरको हलुवा तयार भयो । नोट स् गाजरको हलुवा आफ्नो इच्छाअनुसार तात्तातो या केहीबेरपछि हल्का चिसो बनाएर पनि खान सकिन्छ ।
सय ग्राम बराबर गाजरमा पाइने पोषक तत्त्व :
प्रोटिन ०.९ ग्राम फलाम २.२ मि.ग्राम
रेसा १.२ ग्राम भि.सी. ३ मि. ग्राम
फसफोरस ५३० मि.ग्रा. खनिज पदार्थ १.१ ग्राम
भिटामिन “बी” ०.०४ मि.ग्रा. क्याल्सियम ८० मि.ग्राम
चिल्लो पदार्थ ०.२ ग्राम भिटामिन ए ३,१५० मि.ग्राम
कार्वोहाइडे्रड १०.६ ग्राम क्यालोरी ४८ मि.ग्राम
विप्लव नेकपा पश्चिम नवलपरासीले प्रधानमन्त्रीलाई बेसार पठायो
बेसार औषधिमय भएकाले मजाक नउडाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
राप्ती गाउँपालिकाको ७ वटा वडामा कुखुरा पालक समुहलाई उन्नत जातको चल्ला वितरण